Uphiko Lwezilimi Kuzwelonke. Uphiko lweziLimi kuZweIonke lugqugquzela futhi lwenza lula ukuxoxisana ngezilimi ezahlukene. Ekuzameni ukuhambisana nokushiwo uMthe
ⓘ Uphiko Lwezilimi Kuzwelonke. Uphiko lweziLimi kuZweIonke lugqugquzela futhi lwenza lula ukuxoxisana ngezilimi ezahlukene. Ekuzameni ukuhambisana nokushiwo uMthe ..